FAAH-FAAHIN: Sababta ka danbaysa is-casilaadda Guddoomiyahii Guddiga dib u Eegista dastuurka Soomaliya – Radio Daljir
Maajo 6, 2015 10:22 b 0
Arbaco, May 06, 2015 (Daljir) — Gudoomiyahii guddiga madaxa-bannaan ee dib u eegista iyo hirgalinta dastuurka Soomaaliya, Caasho Geelle Diiriye ayaa shir ay maanta ku qabatay magaalada Gaalkacyo ku sheegtay inay iska casishay xilkii ay ka haysay guddiga dastuurka KMG ah ee Soomaaliya.
“Xaqiiqadii mas’uuliyadan banaynteedu iguma sahlanayn kumana faraxsani inaan doc- faruuro rajada shacabka Soomaaliyeed naga filayeen ,waxaase ka sii daran inaan iska huwanaado magacaan oo wax weyni aysan ka hoosaynin ,maadaama aan ka walaacay inaan ku guulaysan waayo howshii naloo ig-maday,“ ayey tiri Marwo Caasho oo la hadlaysay warbaahinta.
“Waxaan shakhsiyan odorosay in aysan fududayn suuro-galnimada ah in la dhameystiro dastuur heshiis lagu wada-yahay, xiliga kooban ee noo haray, iyadoo ay jiraan xaaalado cakiran oo dalka ka jira “ ayey tiri Marwo Caasho oo ku dheeraatay sababaha keenay in ay xilka iska caasho.
Caasho Geelle ayaa sheegtay in ay jiraan ku kala fikir duwaanaansho fasiraadda qodobada dastuurka ku jira ah oo u dhaxeeya guddiga ay madaxda ka ahayd iyo dowladda Somalia, taasoo soo dadajisay inay xilka banayso maanta sida ay sheegtay.
“Inkastoo aanu shaki ku jirin duruufaha dalka ka jira ,hadana waxaa cad inaan qorshayn fiican horey loogu samayn dastuurka Qaran iyo dhamays-tirkiisa,“ ayey mar kale xustay Marwo Caasho ku sheegtay shirkeeda jaraa’id.
Gudoomiyahii hore ee guddiga dib u eegista dastuurka ayaa sheegtay in xubnaha ku jira guddigan ay qayb-ka yihiin dib u dhaca ku yimid howlihii dastuurka, sababo la xiriira inay wadanka ka maqan-yihiin.
Marwo Caasho ayaa sidoo kale sheegtay in sababaha keenay is casilaadeeda ay ku jiraan fara galin dhinacyo badan uga imaanaysay guddiga waxayna ku dartay intaas in dhaqaalihii lagu dhamaystiri lahaa dastuurka aan ilaa hadda la haynin.
Ugu danbayn, Caasho Geelle oo horey wasiirka haweenka uga soo noqotay Puntland laba jeer ayaa shirkan ay ku qabatay Gaalkacyo ku codsatay in aan laga been abuuran shirkeeda, waxayna ku baaqday in laga shaqeeyo midnimada dalka.